Rosia: Fanohanana ireo niharam-boina tamin’ny lelafo amin’ny alalan’ny famatsiam-baovao amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2010 3:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, македонски, Italiano, বাংলা, Español, English
[Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny blaogy Ushahidi. Fitaovana nampiasaina tao Kenya ny Ushahidi ho fanehoana kisarisary tamin'ny fotoanan'ny krizy tamin'ny taona 2008 ary nanomboka tamin'izay dia lasa nampiasaina maneran-tany izy io ho famatsiana sy fanarahana vaovao amin'ny alalan'ny aterineto.]
Nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo, taorian'ny hafanana migaingaina tsy mbola fahita hatrizay, ny lelafo dia mbola nampihoronkoditra hatrany ny ankamaroan'ny ampahan'ny andrefan'i Rosia, ahitàna ny faritr'i Moscou. Farafahakeliny, miisa 40 ireo namoy ny ainy ary 77 ireo tanàn-dehibe sy tanàna kely no rava tanteraka, vahoaka an'arivony no lasa tsy nanan-kialofana sy very fanànana. Nanao fanambarana mikasika faritra 7 mila vonjy maika ny filoham-pirenena Rosiana Dmitry Medvedev, na teo aza izany dia toa hita manana olana goavam-be eo amin'ny fanangonam-baovao, fanohanana sy ny fanolorana fanampiana sahaza ho an'ireo niharam-boina ny manam-pahefana.
Mavitrika eo amin'ny fanaparitahana io sehon-javatra mampahonena io sy eo amin'ny firotsahana an-tsehatra amin'ny fanolorana fanampiana ho an'ireo izay mila izany ny vondrom-piarahamonina Rosiana ao amin'ny aterineto, tafiditra ao anatin'izany koa ireo mpitoraka blaogy avy ao amin'ny tontolon'ny blaogy Livejournal.com . Nisy vondrom-piarahamonina manokana antsoina hoe “Pozar_Ru” noforonina ho an'ireo liana amin'ny fanolorana fanampiana. Hita fa misy ny tsy fitovizan'ny fisehoan-javatra, raha ny horohoron-tany no resahana dia indray miseho avokoa ny ankamaroan'ny fahasimbana rehetra, nefa kosa eto dia misy faritra vaovao foana ipoiran'ny lelafo be saika isan'ora ary faritra midadasika no isehoan'izany. Vokatr'izany, ho an'ny vondrom-piarahamonina iray eto amin'ny aterineto dia miteraka fibosesehan'ny vaovao io ary mampananosarotra ny fandrindràna ny fanampiana . Ny hita hoe tsy ampy sisa dia ny fisian'ny sehatra hanampy eo amin'ny fandaminana ny fidiran'ny vaovao sy ny ezaka fanampiana.
Tamin'ny faha 31 jolay, nanoratra lahatsoratra iray tao amin'ny blaogiko aho ka nampitondraiko ny lohateny hoe “Mila ny fampiasana ‘Ushahidi’ ny lelafo ao Rosia”. Nanoratra momba ny anjara-asan'ny Ushahidi aho, fitaovana iray fanangonana sy fanaraham-baovao amin'ny alalan'ny aterineto, any Haiti sy Chili ary nanazava aho fa io fitaovana io no tena mifanaraka indrindra amin'ny zava-misy ao Rosia ankehitriny. Tao anatin'ny ora vitsivitsy, namoaka fanindroany an'io lahatsoratra io indray i Marina Litvinovich, mpitoraka blaogy fanta-daza iray sady mpanohitra, ka niparitaka tao amin'ny vondrom-piarahamonina Pozar_Ru io lahatsoratra io. Nahaliana tokoa ireo mpamaky maro ary niteraka adihevitra nafana teo amin'ny sehatry ny aterineto izy io. Andro manaraka taorian'izay, namelona ny Ushahidi i Alexey Sidorenko, mpitoraka blaogy ao amin'ny Altz-gamer ary mpanoratra ao amin'ny Global Voices Runet Echo project.
Ny adiresin'ilay vohikala dia Russian-fires.ru ka nomena ny lohateny hoe “Russian fires 2010″. Nampiasa ny teny Rosiana izay efa voadika tany aloha i Sidorenko nandritry ny fampiasana ny Ushahidi tao Kyrgyzstan. Niantso olona teratany Rosiana, mpanangana rindran-kajy mba hiara-miasa aminy izy eo amin'ny fampivoarana an'io sehatra io amin'ny alalan'ny blaogy Rosiana fanta-daza IT, Habrahabr. Niantso olona mahafatrapo ihany koa i Marina Litvinovich mba hiditra ao amin'ny fikambanana mba hanatontosa sy hanome fanampiana eo amin'ny fitaterana zava-mitranga eo amin'io sehatra vaovao io.
Ny tena tanjona amin'ny fampiasana an'io fitaovana io dia tsy ny fanehoana an-tsary ny toerana nitrangan'io afo io fa voalohany indrindra, ny famoronana rohy mampifandray ireo mponina mila fanampiana sy ireo manam-paniriana ny hanampy azy ireo. Aseho anatin'ny sokajy maromaro ao amin'io sarintany io ny mikasika ny “Zavatra mety ilaina rehetra” (ireo sokajy ao: mila trano fialofana, mila akanjo fitafy, mila sakafo, mila famindran-toerana etc.) ary ny hoe “Te hanampy aho” (ireo sokajy ao : “Manana akanjo fitafy aho”; “Manana fitaovam-pitaterana aho”; “Manana sakafo aho”; etc.). Io kisarisary io koa dia mampiseho “foibem-panampiana” sy toerana azo atoriana ho an'ireo olona tsy nanan-kialofana intsony.
“Russian Fires 2010″ no voalohany indrindra nampiasàna ny Ushahidi tany Rosia ho amin'ity tanjona manokana ity , ary voalohany ihany koa angamba izao ny mponina amin'ny aterineto Rosiana no nirona nankany amin'ny fitaovana fampielezam-baovao mahaleo tena. Vao iray andro fotsiny no nisian'io tetikasa io nefa dia efa nahangona vondrona matanjaka maromaro sy fitateram-baovao am-polony izy. Tsara ny manamarika fa mety ahitana tsy fetezana kely ao amin'io vohikala io (misy olana eo amin'ny endriky ny soratra izay tokony mbola ho aravona) ary olana maro hafa nohon'ny maha-vohikala vaovao azy, fa manantena ny hamaha ny olana rehetra, handalina ny momba an'io fitaovana io ary hikaroka fanampiana hafa ireo mpitantana ao.
Tsy fantatray tsara raha toa ka nahitana fahombiazana ny fampiasana ny Ushahidi Rosiana voalohany fa efa taratra mazava tsara fa i Rosia irery no firenena nampiasa ny “Ushahidi” nohon'ny halehiben'ny fahavitrihana sy ny fiaraha-miombona ary fifanampiana eo amin'io vondrom-piarahamonina anaty aterineto io. Manaporofo izany ny hafangainam-pandehan'ny “Ushahidi” . “Aleo hanampy antsika tsirairay avy mba hifanampy ny teknolojia” hoy ny vohikala “Russian Fires 2010″ . Antenaina mba ho tanteraka izany teny filamatra izany.
Raha mila fanampiana na torohevitra na fanampim-panazavana ianao dia afaka manoratra any amin'i Gregory Asmolov, gregory [dot] asmolov [at] gmail dot com na i Alexey Sidorenko, sidorenko [dot] a [at] gmail [dot] com.
Misaotra indrindra, ary mba ampahafantaro ny mponina hafa ao Rosia anie ny fisian'io vohikala io azafady indrindra e.